Hevitra tsotra momba ny famoronana pejy SEO tsara tarehy?
Tsy mora ny manova ny fifamoivoizana fikarohana mangatsiaka. Amin'izao fotoana izao, ny mpisera tsirairay izay miditra amin'ny fangatahana manokana ao amin'ny Google dia mandray karazana tranonkala maro mifandraika amin'ny niche izay manandrana manery azy hijanona. Ity safidy goavana ity dia nanasarotra ny dingan'ny fampiroboroboana ny aterineto. Misy mpivarotra an-tserasera sasany mivoaka ao amin'ny hedgerow raha tsy misy tombony kely avy amin'ny orinasa an-tserasera.
Mba hisorohana ny fahadisoana hatrany am-boalohany, mila mianatra ny fomba hananganana pejy mitazona ny fomba tsara indrindra. Raha tsy tianareo ny mpitsidika mitsidika ny pejinao, dia mila manao azy ireo ianao rehefa tonga any amin'ny pejinao. Izany no antony ilanao ny hampifanaranao ny pejy landinganao.
Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia hahita fomba fiasa miasa ianao izay ahafahanao manova ny pejinao mitazona sy ny SEO.
Tsy maintsy manana elanelan'ny pejy fananganana
Ny antso amin'ny hetsika dia ampahany manan-danja amin'ny kalitao pejy Lahatsoratra dinika. Ny mpanjifa mila anao dia mila mahazo fitarihana mazava izay tokony hataony ary nahoana ny vokatra na ny serivisinao dia afaka manampy azy ireo hiaina tsara kokoa. Amin'ny alàlan'ny antso an-tariby hanehoana ireo hetsika, dia lazainao amin'ny mpitsidika ny zavatra tokony hatao. Ohatra, "fivarotana ankehitriny," "baiko," "miantsoa izao," "hanoratana" sy ny sisa.
Ireo mari-pamantarana an-tsehatra ireo dia hanosika ny mpitsidika anao any amin'ny tranokalan'ny fiovam-po. Izany no antony tokony hanomezanao azy ireo tari-dalana mazava sy mazava tsara izay tokony hataon'izy ireo amin'ny manaraka ao amin'ny tranokalanao. Tsy voatery hametraka antso maro ho an'ny hetsika ao amin'ny pejy fandrahonana ianao izay mety hampiala voly amin'ireo fampahalalana fototra. Ataovy azo antoka fa ny bokinao amin'ny bokotra fihetsika dia aseho farafahakeliny indray mandeha any amin'ny distrika maso, izay toa hita eo afovoan'ny pejy ary mitopy maso. Raha toa ka apetraka eo ambany elatrao ny votoatinao, avereno indray ny antsonao amin'ny bokotra fihetsika.
Amin'ny ankapobeny, ny tolotra dia manome ny mpanjifanao amin'ny fifanakalozana izy ireo hanao izay tianao. Ny soso-kevitra voafaritra tsara dia ampahany tsy azo lavina amin'ny pejy mitongilana. Ny tolo-kevitrao dia hamorona fanapahan-kevitry ny mpanjifa. Mety ho endrika fihenam-bidy, fitsarana maimaim-poana, famoahana vokatra maimaim-poana, fotsy lava, na fanomezana. Mba hampidirana ny mpitsidika anao ao amin'ny tranokalan'ny fiovam-po, mila manintona mpampiasa misy soso-kevitra manokana ianao, izay mahatonga ny loharano ho tsara kokoa noho ny mpifaninana tsenanareo. Raha manao izany ianao, dia mahazo fotoana hahafahanao mampiseho ny mpanjifa mety ho sarobidy ny asanao ary ahoana no ahafahan'izy ireo mandray soa amin'ny fividianana izany. Ohatra, ny sampan-draharaha misahana ny consultation dia afaka manome ny mpampiasa ny fifanakalozan-kevitra malalaka voalohany, izay, raha ny tena izy, fivoriana iray hamaritana ny fomba ahafahan'ny olona mandray anjara amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa Source .